China Wheat Planter ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | RY AGRI
Onye kụrụ ọka na-agha ọka wit. Nwere ike ịhọrọ site na 9 ruo 24 ahịrị. Ngwaahịa ahụ nwere etiti, igbe fatịlaịza mkpụrụ, mita mkpụrụ, ọkpọkọ na-ewepụta fatịlaịza, oghere na-emeghe ọnụ na wiil na-egweri. Ditching, fertilizing, seeding na leveling arụmọrụ nwere ike dechara na otu laa.
Igwe ahụ dị mfe iji dozie, sie ike, enwere ike iji ya kụọ mkpụrụ n'ọtụtụ ebe.
Site ukpụhọde ịkọ n'ọnụ ma ọ bụ diski, na osisi ndị dị otu omimi iji hụ na imekotaotuugbo germination. Enwere ike iji fatịlaịza rụọ ma ọ bụ enweghị fatịlaịza.
Atọ nwere akara
Na-agha mkpụrụ osisi na ifatilaiza n’otu oge
· Igbe fatịlaịza na igbe mkpụrụ bụ nke igwe anaghị agba nchara, nke agaghị emebi ma ọ bụ nchara.
· Ọrụ akara nke ịgba dị ezigbo mma, ọ dịghịkwa mfe ịbanye n'ájá
· Mgbe ịgha mkpụrụ, enwere ike gbanwee ya na akpaghị aka dịka ogo ala.
· Ọ nwere ike mezue arụmọrụ dị ka leveling, ditching, fertilizing, agha, compacting, ekpuchi ala na mkpọpu ala oghere.
· Fechaa abụọ diski opener, nke nwere ike were were dị okporo mmiri, ifatilaiza na-agha na ala ebe ahịhịa na-laghachi n'ọhịa.
· Ngwaọrụ na-akpụcha ihe nwere ike ime ka igwe na-arụ ọrụ nke ọma na ụrọ.
Usoro nkwakọ ngwaahịa nke igwe ahụ n'ozuzu ya bụ ígwè, a na-ekpebikwa usoro njem dị ka ọnụọgụ nke ngwaahịa ahụ si dị, na-abụkarị site n'oké osimiri, n'ihi na oke ọka na-akụ ọka buru ibu, ọ bụrụ na ị nwere onye ọrụ a, anyị nwekwara ike ịnapụta igwe gị na China.
Nke gara aga: Ọka ọka
Osote: Osisi galik